प्रदेश नं १ः पर्यटकीय नगरी बनाउँ
प्रदेश नं १ लाई पर्यटकीय नगरिका रुपमा विकास गरेर समृद्धीको नयाँ मार्ग खोज्नुपर्ने देखिएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशमा पाँच लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याइने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताइरहँदा पर्यटकीय
रक्तदान गरौं पुण्य कामाउँ
नेपालका विभिन्न जिल्लामा रगत अभाव भएको खबरहरु आईरहेका छन । चर्काे गर्मी, क्याम्पस बिदा, कतिपय विद्यार्थीको परीक्षा, खेतीपातीको मौसमलगायतका कारण रक्तदान गर्नेको कमी भएपछि रगत अभाव भएको कुरा सार्वजनिक भएको
मानव तस्करलाई जेल हाल
केही दिन पहिले नाइजेरियाको लागोसमा पुगेका म्याग्दीका १३ जना युवा अलपत्र परेको खबर संचार माध्यममा ब्यापक रुपमा छाएको थियो । पैदल तथा हवाईमार्ग हुँदै अमेरिका प्रवेशका लागि मोटो रकम बुझाएर
हामीलाई बस्ने ठाउँ खोई ?
प्रदेश नं ७ को सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको आव २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा सीमान्तकृत समूदायलाई उपेक्षना गरेको देखिएको छ । हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिएका समुदाय स्थानीय सरकारबाट पनि
कृषिमा लगानी बालुवामा पानी
नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कुनै गाम्भीर्यता देखिएन। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा १३ खर्ब १५ अर्ब रूपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न क्षेत्रमा अहिले चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। अर्थमन्त्री युवराज
बीपी राजमार्ग सिन्धुलीको कि राज्यको ?
राजमार्गमा निर्बाधरूपमा सबै प्रकारका सवारीसाधन गुड्न पाउनुपर्छ। कुनै काइते र बेतुकका नीति छन् भने तिनलाई सच्याउनुपर्छ। बाटो भत्किए बनाउनुपर्छ। बजेट छैन भने सरकारले विनियोजन गर्नुपर्छ। बीपी राजमार्ग सिन्धुलीको मात्र सम्पत्ति
देशका हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचार र अनियमितताले ग्रस्त छ। बेथिति र विकृतिले सीमा नाघेको छ। तस्करी र दलाली मौलाएको छ। सरकारले विकास र समृद्धिको रटान लगाउँदै गर्दा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हरेक
बजार नियन्त्रण गरियोस्
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। देशको समग्र विकासको खाकासहित सार्वजनिक भएको बजेटमा केही विलासी वस्तु तथा सेवामा करको अनुपात बढाउने सरकारको बजेटको नीति रहेको छ। आगामी
संसद् नियमावली छिटो बनाऊ
संविधानको धारा १०४ को उपधारा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कार्यसञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, विषयगत समिति गठन गर्न, सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न
एकताः माओवादी विलय
भर्खरै एमाले माओवादी एकता भएको छ। एमाले ५५ प्रतिशत र एमाओवादी ४५ प्रतिशतको सत्ता साझेदारीमा भएको यो एकताले भावनात्मकरूपमा एकताको रूप लिन जरुरी देखिन्छ। यसले कस्तो गति लिने हो र
नेपालमा हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। बिनाश्रम अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन अनियमितताबाहेक अरू केहीबाट हुन सक्दैन। अस्वाभाविक ढंगले सम्पत्ति आर्जन गर्ने नेतादेखि जनप्रतिनिधिसम्म, कर्मचारीदेखि ठेकेदारसम्म सबैलाई ‘कडा कारबाही’ गरी राम्रो काम
विश्वविद्यालय स्थापनार्थ दोलखा अनुकूल
सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि मापदण्ड तयार गरेको कुराले धेरैमा खुशी छाएको छ। सो मापदण्डअनुसार काठमाडांै उपत्यकामा विश्वविद्यालय खोल्न अनिवार्यरूपमा २ सय रोपनी जग्गा हुनुपर्नेछ। त्यस्तै पहाडी र हिमाली
भूकम्पपीडितको थप १ लाख खोई?
देउवा सरकारले आफू बहिर्गमन हुने समयमा गरेको निर्णयलाई अहिलेको वाम एकताको सरकारले लत्याइदिएको देखियो। देउवा सरकारले भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणमा थप रु १ लाख दिने निणर्य गरेको थियो। यो निर्णयले हामी
स्थानीय विकास कहिले ?
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नयाँ संरचनाअनुसारको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि धेरै भइसकेको छ। स्थानीय निकायहरू लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन बने। नयाँ संरचनामा गएका स्थानीय तहहरूले झन्डै २० वर्षको अन्तरालपछि
बजेटले उत्साह जगाउन सकेन
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल १६ खर्बको बजेट प्रस्तुत
चेतनाको कमी : १३ वर्षमै आमा, २९ वर्षीया हजुरआमा
नेपालमा जतिसुकै अभियान चलाइए पनि बालविवाह एउटा समस्याका रूपमा रहिआएको छ। ‘१३ वर्षमै आमा, २९ वर्षीया हजुरआमा’ शीर्षकमा समाचार आउनु विडम्बनाको विषय हो। उक्त समाचारले नेपालमा अझैसम्म बालविवाह एउटा चुनौतीका
आफ्नो र आफ्नो परिवेशको लागि मानिसले कोही कसैको कुनै प्रयोजन नगरी केवल निहित स्वार्थमा आधारित कर्ममा पनि त्यत्तिकै लिप्त भएको अवस्था छ। यसरी परिवर्तन भइरहेको सामाजिक बनावट हेरिरहेका अर्थात् हिजोको
अहिले सबैतिर विकासको चटारो छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम दोस्रो महिना चलिरहेका बेला सबै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा विकासका कामले थप गति लिन थालेका छन्। असार मसान्तसम्म विनियोजित बजेट सक्नैपर्ने र
मानव तस्करीको कहाली लाग्दो अवस्था
नेपाली युवाको विदेशमोह व्याप्त छ। त्यसमा पनि अमेरिकी सपनाले नेपाली युवा मानव तस्करको चङ्गुलमा फस्ने गरेका छन्। स्वदेशमै श्रम गरी स्वावलम्बी बन्ने कुरा अभैm पनि दर्शनमा सीमित बन्न पुगेको छ।